उपेन्द्र यादवले पाए चार मन्त्रालय, जसपाबाट को-को बन्दैछन् मन्त्री ? — Sanchar Kendra
उपेन्द्र यादवले पाए चार मन्त्रालय, जसपाबाट को-को बन्दैछन् मन्त्री ?
काठमाडाैं । जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा)ले चारवटा मन्त्रालय पाएको छ । जसपाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, वन तथा वातावरण, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय पाएको हो ।
सो मन्त्रालयमा क–कसलाई पठाउने भनेर टुंगो लगाउने जिम्मेवारी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादलाई दिइएको छ । मंगलबार बसेको जसपा संसदीय दलको बैठकले यादवलाई सो जिम्मेवारी दिएको हो ।